ODUU JAJJABOO GUJIITTI RAAWWATAMAA JIRU fi more – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooODUU JAJJABOO GUJIITTI RAAWWATAMAA JIRU fi more
ODUU JAJJABOO GUJIITTI RAAWWATAMAA JIRU
Dararaan mootummaa shiftaa kanaan uummata oromoo irraatti adeemsifamaa jiruu, haala hamaa taheen gad jabeenyaan itti fufee jiraa. Haaluma kanaan guyyaa hardhaa kana godiina gujii lixaa Aanaa dugdaa daawaa magaala fincaawaa fi gandoota baadiyyaa aanichaa keessaatti daraara fi saamiichi jabinaan itti fufee jiraa. Aanaa Dugda Daawaatti
Shunnee Boonayyaa gandaa Dhukkisaa magaadaa kan tahee Loon 4 fi re’ee 5 irraa fuudhuun qalatanii jiruu
Zeeroo Jiloo ganduuma dhukkisaa magaadaa loon isaa guutuu kan qabuu 4 qaba isayyuu jalaa qalaatanii jiruu
Aagaa Jiloo ganduuma dhukkiisaa Magaadaatti loon 3 jalaa qalatanii jiruu hunda jechuudha.
Jiloo Qilxaa ganda meeddanaa loon 7 jalaa fudhaachuun jibiicha tokko keessaa qalatanii jiruu.
Diida Boruu ganda looxii magaadaatti loon 3 jalaa qalatanii jiruu
Gammadaa boruu ganduuma looxii magaadatti loon 4 jalaa fudhaatanii jiruu
Jaarsoo Raaqoo fincaawaa ganda 02 loon lama kanuuma qabuu jalaa fudhaatanii tokko amma qalaatanii jiruu.
Duulli duguuggaa qabeenyaa diinagdeen oromoi ajjeesuu fi oromummaa balleessuu jabiinaan itti fufuutti jiraa. Kanaaf uummaanni oromoo kallaattii maraan jirtaan nuuf birmaadhaa jedhee iyyaa jiraa uummaanni oromoo gujii.
#Qarreewwan Gindhiir osoo obboleewwan teenya Wallaggaa dhuman gammachuu hin qabnu. Duuti Wallaggaa du’a keenya jedhu. Akkanaan isin beekna yoom takkaa diina jala fiigdan.
RSWO: Oromoota Afran Qalloofi Siikkoo-Mandoo irratti, gocha hammeenyaa RIX fi Habashootaan raawwatamaa jiru | RSWO…